Global Voices teny Malagasy · 15 Desambra 2010
15 Desambra 2010
Tantara tamin'ny 15 Desambra 2010
Satria efa hifarana ny taona 2010, manao antso manokana izahay ho an'ny fanohanana amin'ny fanohizana sy fanitarana ny asa vitanay tamin'ity taona ity. Ny mpandrindra, mpanoratra ary mpandika teninay dia mandany ora maro isam-bolana hanambàrana ny haino aman-jerin'olontsotra avy amin'ny faritra sy ny fireneny, mifidy sy mampifandraika ireo feo tena...
Azerbaijan: Fomba fijery avy ety ivelany.
Azia Afovoany sy Kaokazy15 Desambra 2010
Ho an'ireo izay mipetraka any amin'ny firenena somary miavaka amin'ny rehetra, dia maro ireo zavatra azo raisina ho tena misy tokoa. Nefa raha ny hafa avy any ivelany no mahita izany amin'ny voalohany, matetika izy ireo mahita loko sy fomba amam-panao hafa. Vokatr'izany mahafantatra zava-baovao izy ireo
Pakistan: Aasia sy Aafia – Ny tantarana vehivavy Pakistane roa
Azia Atsimo15 Desambra 2010
Maro ny Pakistane no mahatsiaro ho voakasika amin'ny tranga mahazo an'i Aasia Bibi (vehivavy pakistane kristiana iray voaheloka ho faty fa hoe naniratsira finoana) sahala amin'ny fanahian'izy ireo momba ny fitazonana an'i Aafia Siddiqui (voaheloka hifonja 86 taona any Etazonia).